Ukutshintshwa kweMali-mboleko eNtsha yaseJersey ekubonakalweni kwangaphambili kwe-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu, uMkhuselo, uKhuselo lweNqanawa kunye nabameli beBanki
Ukutshintshwa kweMali-mboleko eNtsha kweJersey ekuCazululweni
ikhaya / Ukutshintshwa kweMali-mboleko eNtsha kweJersey ekuCazululweni
Unokufaka isicelo sokuLungiswa kweMali mboleko ngelixa ukuTyhilwa
Iibhanki ziya kusebenza kunye nawe ukuguqula imali mboleko yakho nokuba ubonakele eNew Jersey. Ukuba wakhatywa ungazihlengahlengiswa ngaphambili, masiphinde siqwalasele imeko yakho simahla ukuze ubone ukuba uyakufanelekela na ukwenza oko. Ukukhuselwa kobambiso enkundleni kunye nokuguqulwa kobambiso kuhamba kunye xa ibhanki yakho izama ukuthatha ikhaya lakho.
Ukulungiswa kwemboleko-mboleko eNew Jersey kunye nazo zonke ezinye izandi zikwangumba njengenkqubo elula, nangona kunjalo, azibonakali zihamba lula njengoko kufanelekile. Kanye xa ucinga ukuba unazo zonke amaphepha akho angenisiweyo, akuqhelekanga ukuba ibhanki ijike kwaye icele iikopi zento ocinga ukuba uyingenisile. Ngamanye amaxesha kunokubonakala ngathi ibhanki ayifuni ukusebenzisana nawe. Ingabonakala ngathi abantu abasebhankini abanakukwazi konke konke. Sinamava okomeleza ngokufaka izicelo eziphindaphindiweyo zamaxwebhu afanayo yibhanki.
Ingxaki yezindlu yaqala ngxi kwi-2007 okoko kukhokelele ekunciphiseni kwamaxabiso e-New Jersey kwikhaya naseNew York. Oku kubangele ukuba uninzi lwabanini bamakhaya baseNew Jersey bajongane nokuchazwa kwangaphambili. Ngelixa abantu abaninzi bezama ukujongana nokungabinamntu ngaphandle kwegqwetha, oku akuhlali kusebenza kubo. Iqala ukuba ngumdyarho phakathi kokuphunyezwa kolwamkelo lwemali mboleko ngelixa uboniswa ngaphambili ngelixa abameli bebhanki yakho bezama ukumbona ngokukhawuleza njengoko imithetho kwiLizwe laseNew Jersey ivumela. Ukuba neGqwetha laseNew Jersey kwicala lakho elisebenza ngokubhengezwa rhoqo ngeveki ibotshelwe ukuba ube namava angaphezulu kokufumana uya kufunda kumaphepha ewebhu. Ukuzibonakalisa kukhuselo eNew Jersey kunzima ukukwenza ngokwakho. Ukuya kwinkundla ye
Igqwetha le-NJ linokukunceda ukukhusela ukuFundiswa koLwazi lwakho oluNgabonakaliyo enkundleni ngelixa ufaka isicelo sokuguqula imali obambeleyo oshiyekileyo ngebhanki yakho yangoku.
Ukuba neGqwetha loKhuselo iNew Jersey kwicala lakho elisebenza ngokubonakalayo kwiveki nganye ibotshelelwe ukuba ube namava angaphezulu kokufumana ithuba lokufunda ngokufunda iphepha lewebhu kunye nokuthetha nabahlobo bakho. Ukuzibonakalisa kukhuselo eNew Jersey kunzima ukukwenza ngokwakho. Ukuya kwinkundla ye Ukuchazwa kwangaphambili ngokwakho xa usiya kuchasana negqwetha lamagqwetha akho eBhanki enza amakhulu eembonakaliso zonyaka uyakube ukhutshiwe ngamava abo. Thetha negqwetha simahla namhlanje ukuya ngapha kwizinto ozikhethileyo. Oku akubizi mali. Lubaluleke kangakanani uxolo lwakho lwengqondo?
Zininzi iinkqubo zombini kurhulumente kunye nenqanaba lomdibaniso elenzelwe ukukunceda ugcine ikhaya lakho.I-State of New Jersey ine Inkqubo yokuThintela ukubhengeza. Ukuba ufuna uncedo lokufaka isicelo soncedo, sinokuhamba ngenkqubo. Le nkqubo yokuxelwa kwangaphambili iyafumaneka kwi inqanaba lomdibaniso yamazwe amaninzi.
Tsalela umnxeba uMmeli woKhuselo lwe-NJ Foreverft namhlanje e-973-200-1111 ukuya ngaphaya kweenketho zakho. Sukukrokrelwa ukuba uhlawule umntu ukuze athethe nawe. Nxibelelana nomntu oza kuhamba ngaphezulu kwemeko yakho ukuze akunike zonke iinketho zakho.